Caddaaladda Hawada Sare waa dilaa weyn oo marti ah oo leh ciyaaro iskaashi | Androidsis
Caddaaladda Hawada Sare waxay noo geysaa dhammaadka booska si aan ula dagaallano dhammaan noocyada maraakiibta Cadaw inagu dhici doona. Cinwaan ciyaartoy badan sabab u ah xaqiiqda ah inaad la ciyaari kartid ciyaaryahan kale qaab iskaashi. Taasi waa, diyaar u noqo inaad ku biirto xoogaga si aad u abuurto awood aad u weyn oo labadiinaba u dhexeysa.
Ciyaar lagu faano a geyn farsamo weyn kaas oo loogu raaxeysto bandhig wanaagsan shaashadda, asalka oo bixiya dareenka qoto dheer iyo horumarin taxane ah oo weyn si markabkeenna looga baqo adduunka oo dhan. Cinwaan lagu raaxeysto oo aan ka faalloon doonno sida ugu fiican riwaayadaha uu sameeyo.
1 Gallaxyada si wada jir ah uga soo horjeedda cadowga aan la aqoon
2 Cadaaladda Hawada waa toogasho buuxda oo kor loo qaado
3 Muuqaal toogasho ah oo dhan oo loogu talagalay moobilkaaga
Gallaxyada si wada jir ah uga soo horjeedda cadowga aan la aqoon
Sheekada Cadaaladda Hawada Sare waxay ina geynaysaa daqiiqad markay tahay galladii oo dhan ayaa khatar ku jirta oo ay ku jirto in loo midoobo sidii looga adkaan lahaa cadowga aan la aqoon. Hadafkeenu wuxuu noqon doonaa inaan nafteenna hor dhigno koox howleedyo gaar ah oo mas'uul ka noqon doona gaarsiinta dharbaaxo cabiran iyo istiraatiiji istiraatiiji ah iyadoo loo marayo soohdimaha koonkan ballaadhan.
Fikraddu waxay tahay inaan ku suganahay markabkeenna si aan uga soo dirno maraakiib kale oo dagaal si aan uga takhalusno cadowga. Tani waxay ka dhigan tahay inaan sidoo kale fursad u yeelan doonno ku weeraraan diyaaradaha kuwa kula tartamaya si loo hanto booska wax walbana loo fududeeyo.
Aynu nidhaahno Cadaaladda Hawada waa gabi ahaanba 'em up' oo qaata qaaciddada sixirka ee naga dhigtay inaan wajahno hal nooc oo noocaas ah R-Noocyada iyo in ka badan. Marka laga reebo inaad awood u leedahay inaad cadowga ku baabi'iso maraakiibtaaga kala duwan, waxaad fursad u heli doontaa inaad maamusho diyaaradahaaga si aad u cusbooneysiiso oo aad ula jaanqaado hagaajinta. Waxaan ula jeedaa, wax walba waad haysataa buundada taliska meesha lagu baarayo tiknoolajiyada cusub iyo xitaa helitaanka diyaaradaha dagaalka.
Cadaaladda Hawada waa toogasho buuxda oo kor loo qaado
Marka wax walbaa kuma dagaallami doonaan oo kuma dagaallami doonaan meelaha bannaan, laakiin waa inaan ogaanno qalabaynta markabka weyn dhammaan horumarintaan taas oo noo ogolaaneysa inaan si sax ah ugu horumaro dhanka Cadaaladda Hawada. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaan heli doonno ikhtiyaarka aan ku dooran karno maraakiib kala duwan, hub, drones iyo dhammaan noocyada aaladaha.
Hoot weyn oo lagu siinayo Cadaaladda Hawada waayo-aragnimo ciyaar wanaagsan; dhow khibrad kale oo ah maraakiibta galactic-casri ah oo ka socda Planetary Pew Force. Waa inaan sidoo kale ka fikirnaa in markab kasta wuxuu leeyahay duuliye u gaar ah oo leh xirfado dhowr ah taas oo ku xidhan jinsiyadooda.
Caddaaladda Hawada waxay kaloo isticmaashaa PvP (Ciyaaryahan iyo Ciyaaryahan) si ciyaaruhu u yeeshaan feejignaan dheeri ah waxaanan isku dayeynaa inaan markabkeenna siino awoodda ugu badan ee toogashada. In kasta oo aan la joogeyno kulamadaas iskaashatooyinka u dhexeeya 2 ciyaartoy waqtiga dhabta ah Kuwaasi waa kuwo balwad leh oo ku filan sidaa darteed heerar badan ayaa isla sameeya.
Muuqaal toogasho ah oo dhan oo loogu talagalay moobilkaaga
Ugu dambeyntiina, waxa aan uga tagnay Cadaaladda Hawada waa runti yaqaan sida loo siiyo khibrad ciyaareed aad u fiican. Inta udhaxeysa hagaajinta diyaaradaheena waawayn, jawiga hawada ee aadka uqurux badan iyo dhamaan ladagaalanka la isku riixo ugu badnaan, waxaan dhadhan weyn u leenahay afkeena inaan kusii wadno midba midka kale.
Farsamo ahaan waa mid aad u guuleysata waana soo bandhigi karnaa Naqshadeynta markabka, madaxdii ugu dambeysay, jawigaas taasi waxay ku dhaqaaqdaa cabsi si ay u soo saaraan saameynta qoto dheer iyo dhammaan qaraxyadaas la soo saaro marka aan burburinno markab cadow ah. Ciyaar wax badan ka taagan heerkeeda garaafka si aan runtii ugu raaxeysanno.
Caddaaladda Hawada Sare waa cinwaan lagu meeleeyay meel gaar ah ku jira nooca toogashada 'em ilaa Google Play Store. Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah illaa iyo sannadkaan mobilkaaga oo wajiyo badan leh, in kasta oo mid ka mid ah kuwa sida aadka ah noo soo jiidanaya ay tahay awoodda lagu hagaajinayo markabka weyn ee leh dhammaan noocyada teknoolojiyada.
Muhiim ah jaantusyada
Ku cusbooneysii markabka weyn horumarin badan
Ciyaaraha illaa laba
Waa nooc si fiican loo aqoonsan karo
Caddaaladda Hawada: Galaxy Wars
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Caddaaladda Goobtu waa mid aad u qurux badan oo aad la ciyaarayso mid kale isla waqtigaas
Awood siinta Daahfurka 18.000 mAh Telefoon ee MWC 2019